20 “Kana ukaenda kunorwa nevavengi vako, ukaona mabhiza nengoro dzehondo,+ vanhu vazhinji kukupfuura, usavatya; nokuti Jehovha Mwari wako anewe,+ iye akakubudisa munyika yeIjipiti.+ 2 Pamunenge maswedera pedyo kuti murwe, mupristi anofanira kuswedera otaura nevanhu.+ 3 Anofanira kuti kwavari, ‘Haiwa imi vaIsraeri, inzwai, muri kuswedera pedyo nhasi kuti murwe nevavengi venyu. Mwoyo yenyu ngairege kutya.+ Musatya momhanya mavhunduka kana kuvadedera,+ 4 nokuti Jehovha Mwari wenyu ari kufamba nemi kuti akurwirei pavavengi venyu kuti akuponesei.’+ 5 “Vatungamiriri+ vanofanirawo kutaura nevanhu vachiti, ‘Pane murume akavaka imba itsva asi asati aitsaurira here? Ngaaende, adzokere kumba kwake, kuti arege kufira kuhondo, mumwe murume akazoitsaurira.+ 6 Pane murume akadyara munda wemizambiringa asi asati atanga kuushandisa here? Ngaaende, adzokere kumba kwake, kuti arege kufira kuhondo, mumwe murume akazotanga kuushandisa.+ 7 Pane murume akavimbisa mukadzi kuti achamuroora asi asati amutora here? Ngaaende, adzokere kumba kwake,+ kuti arege kufira kuhondo, mumwe murume akamutora.’ 8 Vatungamiriri ngavataurezve nevanhu vachiti, ‘Pane murume anotya uye asina ushingi here?+ Ngaaende, adzokere kumba kwake, kuti arege kuita kuti mwoyo yehama dzake itye sezvinoita mwoyo wake.’+ 9 Kana vatungamiriri vapedza kutaura nevanhu, ngavagadzewo vakuru vemauto kuti vatungamirire vanhu. 10 “Kana ukaswedera pedyo neguta kuti urirwise, unofanira kurizivisawo mashoko orugare.+ 11 Kana rikakupindura mhinduro ine rugare uye rikakuvhurira masuo aro, vanhu vose vanowanikwa mariri ngavave vako kuti vashande basa rokumanikidzirwa, uye ngavakushumire.+ 12 Asi kana rikasaita rugare newe,+ rikaita zvehondo newe, uye iwe uchifanira kurikomba, 13 Jehovha Mwari wako achariisawo muruoko rwako, uye unofanira kuuraya vanhurume vose vari mariri nomuromo webakatwa.+ 14 Vakadzi chete nevana vaduku+ nezvipfuwo+ nezvose zvinenge zviri muguta racho, zvose zvaunenge wapamba mariri uzvitore kuti zvive zvako;+ udye zvakapambwa kuvavengi vako, vawakapiwa naJehovha Mwari wako.+ 15 “Ndizvo zvauchaitira maguta ose ari kure kwazvo newe asiri maguta emarudzi aya. 16 Asi haufaniri kuchengetedza chero chinhu chipi zvacho chiri chipenyu mumaguta evanhu ava auri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ave nhaka yako,+ 17 nokuti chokwadi unofanira kuaparadza chose, vaHiti nevaAmori, vaKenani nevaPerizi, vaHivhi nevaJebhusi,+ sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako; 18 kuti varege kukudzidzisai kuita maererano nezvinhu zvavo zvose zvinosemesa, zvavakaitira vanamwari vavo, mukatadzira Jehovha Mwari wenyu.+ 19 “Kana ukakomba guta kwemazuva mazhinji uchirirwisa kuti uritore, usaparadza miti yaro nokuitema nedemo; nokuti uchaidya, usaitema,+ nokuti muti womusango munhu here anofanira kukombwa newe? 20 Asi muti waunoziva kuti hausi muti wezvokudya bedzi, ndiwo wauchaparadza, uuteme wovaka masvingo okurwisa+ guta racho riri kurwa newe, kusvikira rakundwa.